Ny vahoaka sy ny fananany… | NewsMada
Ny vahoaka sy ny fananany…
Par Taratra sur 11/02/2020
Tsy laitra ! Mila ho isan’andro, rey olona, ny fanafihana sy fandrobana ataona andian-jiolahy mitam-piadiana amin’ireny toerana fandraisana sy fandefasana vola amin’ny alalan’ny fifandraisana, na « cash-point », araka ny ahalalan’ny maro azy ireny. Nisesy sy miseho amin’ny endrika mahery vaika izany tato anatin’ny andro vitsivitsy. Nisy mihitsy aza, araka ireny efa notaterina teto ireny no niafara amin’ny famoizana aina sy faharatrana olona. Ny volabe sy ny fitaovana (solosaina, telefaonina finday…) voaroban’ireo jiolahy moa izany efa tsy lazaina intsony.
Tsy eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany no mitranga ny fanafihana sy fandrobana, fa tonga hatrany amin’ny faritany, toa izay nitranga tany Ambositra, ny faran’ny herinandro teo. Omaly, dia io amin’ny lahatsoratra, etsy an-kilany io indray ny zava-nitranga, teny amin’ny cité des assureurs, Itaosy. Tamin’ity aza, raha ny re dia hoe nisy fihazonana an-keriny, na fanaovana takalonaina nataon’ireo jiolahy mihitsy. Izay no ilazana ery ambony fa toa efa miseho amin’ny endrika mahery vaika mihitsy izy ity.
Inona no dikan’izany ? Valiny ; efa tena fihantsiana ny mpitandro filaminana (polisy sy zandary) izao. Noho izany, ilaina fandraisana fepetra hentitra, stratejia na tetikady maty paika, … ny toe-draharaha. Mba tsy ho efa miseho hatrany ny fandrobana sy ny asan-jiolahy vao miditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana. Raha ny marina, fisorohana no tokony atao, amin’ny alalan’ny fisafoana tsy tapaka ny faritra sy ny tanàna. Indrindra ireo lazaina ho faritra mena amin’ny asan-jiolahy. Ary tsy hoe amin’ny alina ihany fa na amin’ny andro antoandro koa aza. Izay no tena atao hoe “fiarovana ny vahoaka sy ny fananany”.